Ukuba China esibanzi emikhulu isitokwe ngokuhlanganyela iqembu, Qingdao Tianyi Group yasungulwa ngo 1976, okuyinto ezingaphansi zihlanganisa yendwangu imishini, othomathikhi indawo elawula uhlelo, motor kagesi, ngokhuni wezandla womshini, ukuthuthukiswa kwezakhiwo, ukwakhiwa, umhlobiso njll Inhlokodolobha bhalisiwe kuyinto 570 abayizigidi ezingu yuan. Kukhona abasebenzi abangaphezu kuka-6000.
Qingdao Tianyi Iqembu i-Red Flag Textile Imishini Limited Inkampani kuyinto ehamba phambili yendwangu umshini nomkhiqizi e China. Thina onguchwepheshe ucwaningo, ukuthuthukiswa, nokukhangiswa ukusebenza eliphezulu, eliphakeme quality air-jet uhlaka lokweluka indwangu, amanzi-jet isikhonkwane sohlaka lokweluka Uhlaka ehanjiswayo.
I-Red Flag Textile kuyinto kazwelonke ukhiye zobuchwepheshe ibhizinisi; "HQF" lokuhweba ubelokhu eqashelwa njengoba lokuhweba edumile by China uhulumeni. Bangaphezu kuka-60 ezisunguliwe kazwelonke kanye namalungelo obunikazi atholiwe. Njengoba abaningi njengoba idumisa: Qingdao City "ubuchule obukhethekile entsha" imodeli yebhizinisi, amabhizinisi ahlanzekile ukukhiqizwa, batch lokuqala "inkulungwane kuleso useyili uhlelo" amabhizinisi, izinga ISO9001 ukuphathwa uhlelo isitifiketi, ISO 14001 Ukuphathwa kwemvelo isitifiketi uhlelo, DHSAS ezempilo ukuphathwa ukuphepha isitifiketi uhlelo, umoya-jet kusondela zihlonzwe njengoba imikhiqizo yegama lomkhiqizo nokunye.
"Quality lokuqala, ukwethembeka yokuqala futhi inkonzo okuqala" Red Maka yendwangu njalo athembisa, futhi kakhulu singalazisa yimuphi amathuba ukubambisana emhlabeni wonke. Manje, imikhiqizo yenkampani yethu akhishwe eYurophu, e-Asia, e-Afrika naseNingizimu Melika, ezifana Ukraine, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, Uzbekistan, Venezuela, Egypt, Mauritius, Turkey njll
"Umsebenzisi izinga unompempe kuphela, standard sika umsebenzisi arcade ejwayelekile ibhizinisi sika" kuyinto i-Red Flag yendwangu njalo banamathele umgomo, ukuze kwanelisa wonke amakhasimende ukuvuselela isidingo ephakeme futhi isifiso zenza kanjalo ngokungayeki.